[Eng Sub] NOT ME เขา...ไม่ใช่ผม | EP.1 [1/4] - MY - Stindx.com
ဇာတ်လမ်းတွင်ပါဝင်သော ကာရိုက်တာများ၊ ဖြစ်ရပ်များ၊ အလုပ်အကိုင်များနှင့် အဖြစ်အပျက်များသည် စိတ်ကူးယဉ်သတ်သတ်သာဖြစ်ပြီး ဖျော်ဖြေရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာ ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤဇာတ်လမ်းမှတစ်ဆင့် အပြုအမူလုပ်ဆောင်ပုံများသည် တိုက်တွန်းခြင်း အားပေးခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိမိကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုရန် အကြံပြုပါသည်။ Translated by Off_Gun Myanmar Fanpage တစ်ချိန်ချိန်မှာ ခင်များနဲ့မျက်နှာတူတဲ့ လူတစ်ယောက် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတိုင်း ခင်များနဲ့တူတဲ့လူရှိခဲ့ရင် ခင်များ ထူးဆန်းသလိုခံစားနေရလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ‘အမြွှာ’လို့ခေါ်တဲ့ အရမ်းကို ထူးခြားတဲ့ခံစားချက်ပဲ အစ်ကို့ကိုရှုံးပြန်ပြီနော် White နောက်တစ်ခါ ပြိုင်ရအောင်လေ P’Black ပြိုင်လည်း White ရှုံးနေဦးမှာပဲ အရှုံးပေးလိုက်တော့ မပေးပါဘူး ခုနကနည်းနည်းပဲလိုတာကို Todd အချိန်ကြည့်တာ ဘယ်လိုလဲ နှစ်ကျော့ ၁ မိနစ် ၂၀ စက္ကန့် Black ဟာရော ၁ မိနစ် ၁၇ စက္ကန့် ၃ စက္ကန့်တည်းကို ရှုံးတာက ရှုံးတာပဲ Toddကိုနိုင်အောင် အရင်သွား ကူးပြိုင်လိုက်ဦး ပြီးမှ အစ်ကိုနဲ့ လာပြိုင် Todd ငါနဲ့လာပြိုင်ဦး တစ်ခေါက်တည်း
တစ်ခေါက်တည်းနော် ဟေ့ကောင် Black ရေ Black ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘူးမလားဗျ ဟုတ်ကဲ့ ညီလေး သတိပြန်လည်ပါပြီဗျ အစ်ကို အန္တရာယ်ကင်းပြီနော် သားနော် ဖြည်းဖြည်းအသက်ရှူနော် ကျွန်မသားကို ခဏအပ်ထားပါရစေနော် ရှင်နဲ့ကျွန်မနဲ့ စကားပြောဖို့လိုပြီ အပ်ထားမယ်နော် ကျွန်မ ကျွန်မကလေးနှစ်ယောက် ဒီလိုဖြစ်နေတာမခံစားနိုင်တော့ဘူး ရှင့်ဆီမှာ ဘာအစီစဉ်တွေရှိလဲပြောလာခဲ့ ကျွန်တော့်အမေနဲ့အဖေနဲ့ လမ်းခွဲကြတုန်းက သူတို့ ဒီဟာကိုအကြောင်းပြပြီး ကျွန်တော်နဲ့ Blackကို ကမ္ဘာခြားအောင် ခွဲခဲ့ကြတယ် သူတို့ရန်ဖြစ်ပြန်ပြီလား အစ်ကို အင်း အစ်ကိုနဲ့ ခွဲပြီး အဖေနဲ့ ရုရှားမှာ လာနေကတည်းက ကျွန်တော်တို့အမြွှာကြားမှာရှိတဲ့ ဆက်နွယ်မှုကို မခံစားရတာကြာခဲ့ပြီ ဆိတ်သုဉ်းကုန်တာကြာခဲ့ပြီ ရေချိုးလို့ပြီးပြီလား မင်း ကိုယ်နဲ့လမ်းမခွဲချင်ဘူးဆိုတာ ကိုယ်သိတယ် အဝေးကချစ်ရတာမျိုးကို တို့မယုံဘူး အလုပ်အတွက်ရော အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ဟင့်အင်း.. ထိုင်းကိုတောင် မပြန်ချင်ဘူး ပြီးတော့ ကိုယ့်အဖေကရော.. အခုဘယ်မှာလဲ သူက အငြိမ်းစားယူပြီး လွန်ခဲ့တဲ့၂နှစ်ကပဲ ထိုင်းကိုပြန်သွားပြီ
သိပ်ခက်ခဲမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်အဖေက ကိုယ့်အတွက်အားလုံးအဆင်သင့်လုပ်ပေးထားတာပဲ နောက်နှစ်အနည်းငယ်ကျရင် သူ့လိုပဲ သံအမတ်ဖြစ်လာမှာလား မင်္ဂလာပါ အဖေ အိမ်ကနေကြိုဆိုပါတယ် White အဖေ ဘာလို့ ရုရှားလိုပြောနေတာလဲဗျ အဖေက ဘယ်သူနဲ့ပြောရမလဲမှ မသိတာ အဲ့တော့ သားနဲ့ပဲပြောရတာပေါ့ ဟိုမှာအလုပ်ပြန်သွားလုပ်ချင်လို့လား သားကတော့လေ အိတ်တွေကို ဒုတိယထပ်ယူသွားလိုက်နော် လာ အိမ်ထဲဝင်ရအောင် White ဟိုနားမှာ ခုန်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ် သွားခုန်ရအောင် အိုကေ သွားမယ် သွားမယ် ဟင် ကြောက်တက်လိုက်တာကွာ ပြန်သွားကွေ့လာလိုက် Black, White ဘာတွေဆော့နေကြတာလဲ ဘယ်သူစက်ဘီးနဲ့ အမေ့ကားကိုတိုက်တာလဲ Black တိုက်လိုက်မိတာ White သားအိမ်ထဲဝင်လေ ကျွန်တော် မသိပါဘူး အခုခံစားနေရတဲ့ ဒီထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်တွေက ဒီကိုပြန်လာလို့ဖြစ်တာလား ဒါမဟုတ် ကျွန်တော်နဲ့ Black ရဲ့ပြန်ဆက်နွယ်မှုကြောင့်များလားဆိုတာ ဒါအရင်သောက်ပြီး ဗိုက်ဖြည့်ထားလိုက်သား ညနေမှအဖေ ညစာ လိုက်ကျွေးမယ် ကြည့်ရတာဗိုက်ဆာနေတဲ့ပုံပဲ များများသောက်နော် သား အဖေသိလား အမေဘယ်မှာပြောင်းနေလဲဆိုတာ
ဘာလို့ ကိုယ်တွေကိုပစ်ပြီး ထွက်သွားတဲ့လူတွေအကြောင်းသိချင်နေမှာလဲ ဒါဆို Black ရော Black ဘယ်မှာလဲဆိုတာ အဖေ မသိဘူး သိတာက မင်းအမေက ငါတို့ ရုရှားပြောင်းသွားကတည်းက Black ကို ခေါ်ထုတ်သွားတယ်ဆိုတာပဲ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်တော့ ရှိတော့မယ်ထင်တယ် သူတို့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားမနေပါနဲ့ ငါတို့လည်း ငါတို့ဘာသာနေပြီး သူတို့လည်း သူတို့ဟာသူတို့နေတာ ပိုကောင်းတယ် White အေးဆေးသုံးဆောင်ကြပါဦးဗျာ အင်.. White ဒါ ဦးလေး Vichian နော် ဌာနမှာအလုပ်လုပ်နေတာ White ကတော့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ ရုရှားမှာကျောင်းပြီးထားတာ ဒါပေမဲ့ သူကစာရတော့ သူများထက် ကြိုကျောင်းပြီးနေတာ ဟိုက ပညာရေးက ယိုးဒယားနဲ့တူလားဗျ White သိပ်တော့မသေချာဘူးဗျ နည်းနည်းတော့ကွာမယ်ထင်တယ် White ဟိုမှာကျောင်းသွားတက်တော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ် Europe လည်းရှိတယ် Asia နဲ့ Russia ရောဗျ သူတို့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုရော အတွေးအခေါ်တွေကိုပါ လေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ် အင် ကျွန်တော့်ဌာနမှာသာ လာလုပ်ရင် အေးဆေးပဲဆိုတာ အာမခံရဲတယ် ဒီမှာ Vichian နောက်အပတ်ကျရင် White ကို သံရုံးမှာစာမေးပွဲသွားဖြေခိုင်းမလို့ မေးခွန်းတွေလိုချင်လား
ဦးလေးဆီမှာ အရင်က စာရွက်တွေရှိတယ် အစမှာတော့ ပုံမှန်မေးခွန်းတွေမေးလိမ့်မယ် နိုင်ငံခြားကိစ္စတွေတော့ သိပ်စိတ်ပူဖို့မလိုပါဘူး ယိုးဒယားမှာ စမှာဆိုတော့ ဘာတွေသိထားပြီးပြီလဲ White က တော်ပြီးသား ဆက်ဆံရေးကလဲ မြန်တယ် ယိုးဒယားက သတင်းတွေလဲ လေ့လာနေပြီးသားဆိုတော့ စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး အဲ့လိုကိုး.. ဒီလိုကလေးမျိုးက အဖေ့လိုပဲ အမြင့်ကြီးတက်ဦးမှာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ White ဒီနှစ်ယောက်ကတော့ အဖေကိုယ်တိုင် အလုပ်သင်ပေးထားတာ သူတို့နဲ့သာ အလုပ်လုပ်မယ်ဆို အဖေတော့စိတ်ချတယ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သားကိုအပ်ပါတယ် ကျေးဇူးပါဗျာ ဟေ့ကောင်ရပ်နော် ရပ် ကျေးဇူးပါခင်မျ ရပ်စမ်း White! White! ဘာဖြစ်တာလဲ သား Black က အခုသေတော့မယ် Black ဘာဖြစ်တာလဲ ဘယ်သူလုပ်တာလဲ မင်းသူ့ကို တွေ့ချင်သေးတယ်ဆိုရင် မင်း ငါ့ကို ဆေးရုံမှာလာတွေ့နော်